पानीलाई रक्सीमा रूपान्तरण, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
यूहन्नाको सुसमाचारले एउटा रोचक कथा बताउँदछ जुन पृथ्वीमा येशूको कामको शुरुवात भएको थियो: ऊ विवाहमा गयो जहाँ उसले पानीलाई रक्सीमा परिणत गर्‍यो। यो कथा धेरै हिसाबले असामान्य छ: त्यहाँ के भएको थियो सानो चमत्कार जस्तो देखिन्छ, मेसेन्सिक कार्य भन्दा बढी एउटा जादुको चालजस्तो देखिन्छ। यद्यपि यसले केही अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई रोक्दछ, यसले मानव दु: खलाई सम्बोधन गरेको थिएन जसरी येशूले निको पार्नुभएको थियो। यो निजी सर्कलमा गरिएको आश्चर्यकर्म थियो जुन वास्तविक लाभार्थीको ज्ञान बिना नै घटेको थियो - जे होस्, यो येशूको महिमा प्रकट गर्ने चिह्न थियो। (यूहन्ना १:2,11:१)
यस कथाको साहित्यिक कार्य केही हदसम्म अचम्मलाग्दो छ। यूहन्नाले येशूका आश्चर्यकर्महरू धेरै जान्दछन् जुन उनले आफ्ना लेखोटहरूमा सोचे होलान् तर उनले आफ्नो सुसमाचारको शुरुवातको लागि मात्र त्यो छनौट गरे। येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई विश्वस्त तुल्याउने यूहन्नाको उद्देश्यले कुन हदसम्म त्यसको काम गर्छ? (यूहन्ना २०: -20,30०--31१)? कुन हदसम्म यसले उहाँ मसीह हुनुहुन्छ र होइन भनेर देखाउँदछ (जसरी यहूदी ताल्मुदले पछि दावी गरे) एक जादुगर?
अब हामी इतिहासलाई नियालेर हेरौं। यो गालीलको सानो गाउँ कानामा भएको विवाहसँगै शुरू हुन्छ। स्थान यति धेरै फरक लाग्दैन - बरु तथ्य यो कि यो एक विवाह थियो। येशूले एक विवाह समारोहमा मसीहको रूपमा पहिलो चिन्ह बनाउनुभयो।
विवाह यहूदीहरूका सब भन्दा ठूला र महत्त्वपूर्ण चाडहरू थिए - हप्ता लामो उत्सवले समुदायमा नयाँ परिवारको सामाजिक स्थितिलाई संकेत गर्‍यो। विवाहहरू त्यस्तो रमणीय उत्सवहरू थिए कि एक व्यक्तिले विवाह भोजको रूपकमा प्रायः बोल्दछ यदि कसैले मसीह युगका आशिष्‌हरू वर्णन गर्न चाहन्छ भने। येशू आफैले यस चित्रलाई परमेश्वरको राज्यको वर्णन गर्न आफ्ना केही दृष्टान्तहरूमा प्रयोग गर्नुभयो।
सांसारिक जीवनमा उसले प्रायः आत्मिक सत्यताहरूलाई स्पष्ट पार्न चमत्कारहरू गर्‍यो। उसले पापहरू क्षमा गर्ने शक्ति छ भनेर देखाउन मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो। उसले नेभाराको रूखलाई सराप्यो जसलाई परमेश्वरको आउँदै गरेको न्यायको संकेतले मन्दिरलाई भुनभुनाउँनेछ। यस विश्राममा उसले आफ्नो प्राथमिकता प्रकट गर्न शबाथमा उनले चaled्गाइ गरे। आफू पुनरुत्थान र जीवन हो भनेर देखाउन उसले फेरि मरेकाहरूलाई बिउँतायो। उनले जीवनको रोटी हो भनेर रेखांकित गर्न हजारौंलाई खुवाए। हामीले हेरिरहेको आश्चर्यकर्ममा, उनले विवाहको भोजमा प्रशस्त मात्रामा आशिष्‌ दिएका छन् भनेर देखाउन कि उसले नै परमेश्वरको राज्यमा मसीहको भोजको देखभाल गर्ने व्यक्ति हुन्।
दाखमद्य सक्यो र मरियमले येशूलाई खबर गरिन्, जसमा उनले उनलाई उत्तर दिए: ... म तिमीलाई के गर्न चाहन्छु? (V.,, ज्युरिख बाइबल) अर्को शब्दहरु मा, म यो संग के गर्न छ? मेरो समय अझै आएको छैन। र यो समय थिएन जब पनि, येशूले अभिनय गर्नुभयो। यस बिन्दुमा यूहन्नाले औँल्याए कि येशू आफ्नो कामभन्दा पहिले केहि अगाडि हुनुहुन्छ। मसीहको भोज अझै आएको थिएन, र अझै येशू व्यवहार गर्नुभयो। मसीहको युग पूर्णतामा आउनु भन्दा धेरै अघिदेखि शुरू भएको थियो। मरियमले येशू केहि गर्न चाहन्थिन्; उनले नोकरहरूलाई आज्ञा दिए कि उसले गर्नु पर्ने प्रत्येक कुरो गरे। हामीलाई थाहा छैन उनी नजिकैको वाइन बजारमा चमत्कार वा छोटो यात्राको बारेमा सोचिरहेकी थिई।
अनुष्ठान धुने लागि प्रयोग गरिएको पानी रक्सी हुन्छ
अब यस्तो अवस्था छ कि नजिकै छ वटा ढु stone्गाको पानी ट्याks्की थियो, जुन सामान्य पानीको घण्टा भन्दा फरक थियो। यूहन्नाले हामीलाई भन्दछ कि यी कन्टेनरहरू यहूदीहरूले अनुष्ठान धुने ठाउँमा प्रयोग गर्थे। (उनीहरूको सफा गर्ने बानीका लागि उनीहरूले ढु the्गाको भाँडोबाट पानीलाई मन नपरेका अन्य प्रकारका प्रयोग गरिएको सिरामिक भाँडाहरू भन्दा बढी मन पराउँथे।) उनीहरूले प्रत्येकलाई liters० लिटर भन्दा बढी पानी समातेर राखेका थिए - तिनीहरूलाई उठाउँदा र त्यसलाई खन्याउनको लागि धेरै। अनुष्ठान धुनेका लागि पानीको एक विशाल रकम। कानाको लागि यो विवाह वास्तवमै ठूलो स्तरमा मनाइएको हुनुपर्छ!
इतिहासको यो अंश ठूलो महत्त्वको देखिन्छ - येशूले यहूदी धुनु पर्ने संस्कारलाई दाखमद्यमा परिणत गर्न लाग्नुभएको थियो। यसले यहूदी धर्ममा परिवर्तनको प्रतीक देखायो; यसलाई पनि अनुष्ठानिक परिक्षणसँगै बराबर गर्न सकिन्छ। कल्पना गर्नुहोस् के भयो होला यदि पाहुनाहरूले आफ्ना हातहरू नुहाउन चाहेका थिए - तिनीहरू पानीका भाँडाहरूमा गएका हुन्थे र उनीहरूले प्रत्येकलाई दाखमद्यले भरिएको भेट्टाएका थिए! उनको संस्कारको लागि कुनै पानी उपलब्ध हुने थिएन। तसर्थ, येशूको रगतको माध्यमबाट आध्यात्मिक शुद्धीकरणले धुने विधिलाई हटायो। येशूले यी संस्कारहरू गर्नुभयो र ती ठाउँहरू अझ राम्रोसँग बदल्नुभयो - आफैंले नोकरहरूले भाँडाकुँडा भरिदिए, किनकि यूहन्ना verse ले हामीलाई भन्दछ। कति उपयुक्त किनकि येशूले पनि विधी पूर्णरूपमा पूरा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई बेकम्मा गर्नुभयो। मसीहको युगमा अनुष्ठान रद्दीकरणको लागि कुनै ठाउँ छैन। नोकरहरूले केही दाखरस चुहाए र त्यो खाद्यान्न मालिक कहाँ लगे, जसले दुलहालाई भन्यो: सबैले पहिले राम्रो दाखमद्य दिन्छन् र मद्यपान गरेपछि थोरैलाई; तर तपाईंले अहिलेसम्म राम्रो दाखमद्य कायम राख्नु भएको छ (V. 10)
किन तपाईंलाई लाग्छ कि यूहन्नाले यी शब्दहरू राखेका थिए? भविष्यमा भोजका लागि सल्लाहको रूपमा? वा केवल येशू राम्रो दाखमद्य बनाउनुहुन्छ भनेर देखाउन? होईन, मेरो मतलब उनीहरूको प्रतीकात्मक अर्थको कारण हो। यहूदीहरू ती मानिसजस्ता थिए जो लामो समयदेखि मद्यको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए (उनीहरूको अनुष्ठान धुने कामहरू गरिएको थियो) यो महसुस गर्न को लागी केहि राम्रो चीज आएको छ भनेर। मरियमका शब्दहरू: तपाईंसँग अब रक्सी छैन (V.)) यहूदीहरूको संस्कारको कुनै आध्यात्मिक अर्थ थिएन बाहेक अरू कुनै कुराको प्रतीक। येशूले केहि नयाँ र राम्रो ल्याउनुभयो।
यस विषयलाई गहिरो बनाउन, यूहन्नाले हामीलाई बताउँछन् कि कसरी येशूले व्यापारीहरूलाई मन्दिरको चोकबाट बाहिर निकाल्नुभयो। बाइबलका टिप्पणीकारहरूले यस मन्दिर सफा गर्ने काम पृथ्वीमा येशूको कामको अन्त हुने अन्य सुसमाचारका पुस्तकहरूमा जस्तै हो वा सुरुमा त्यहाँ एउटा मात्र थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नहरूको पाना छोड्छ। जे भए पनि, जोहानेसले यसको बारेमा यहाँ रिपोर्ट गर्छ किनकि अर्थ यसको पछाडि प्रतीकात्मक रूपमा छ।
र फेरि यूहन्नाले यहूदी धर्मको सम्बन्धमा इतिहास राख्छन्: ... यहूदीहरूको निस्तार-चाड नजिकै थियो (V. 13) येशूले मन्दिरमा मानिसहरूले पशुहरू बेच्नेहरू र त्यहाँ भएका पैसा परिवर्तन गर्ने मानिसहरू भेट्टाउनुभयो - ती पशुहरू जुन पापलाई माफीको लागि बलिदानको रूपमा चढाइन्थ्यो र मन्दिरको कर तिर्ने पैसा प्रयोग गरियो। येशूले एउटा साधारण कोर्रा गर्नुभयो र सबैलाई पछ्याउनुभयो।
यो अचम्मको कुरा हो कि एक जना व्यक्तिले सबै व्यापारीहरूलाई पीछा गर्न सक्षम भयो। (मन्दिर प्रहरीहरू कहाँ छन् जब तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक पर्दछ?) मेरो अनुमान छ व्यापारीहरू उनीहरू यहाँका हुन् भनेर चिनेका थिए र धेरै साधारण मानिसहरू पनि उनीहरू यहाँ चाहँदैनथे - येशूले भर्खर मात्र गर्नुभयो जस्तो गरी मानिसहरूले जे गरे पनि पहिले नै महसुस गरिसक्यो, र डीलरहरू जान्दछन् कि उनीहरू संख्याबृद्ध छन्। जोसेफसले यहूदी नेताहरूले मन्दिरको रीतिथिति परिवर्तन गर्ने अन्य प्रयासहरूको वर्णन गरे; त्यस्ता घटनाहरूमा, मानिसहरूमा यति चिच्याईयो कि प्रयासहरू रोकियो। मानिसहरूलाई बलिदानको रूपमा जनावरहरू बेच्ने वा मन्दिरको बलिदानको लागि पैसा बदल्नेलाई येशूको कुनै आपत्ति थिएन। उनले यसका लागि आवश्यक विनिमय शुल्कको बारेमा केही भनेनन्। उनले भर्त्सना गरेको स्थान केवल छनौट गरिएको स्थान मात्र हो: तिनीहरूले परमेश्वरको घरलाई डिपार्टमेन्ट स्टोरमा रूपान्तरण गर्न लागेका थिए (V. 16) तिनीहरूले विश्वासबाट लाभदायक व्यवसाय गरेका थिए।
त्यसकारण यहूदी विश्वासका नेताहरूले येशूलाई पक्रन सकेनन् - किनभने उनीहरूले थाहा पाए कि उनीहरूले गरेको कामलाई मानिसहरू स्वीकार गर्छन् - तर तिनीहरूले उहाँलाई सोधे कि उनलाई त्यसो गर्न के उचित छ। (V. 18) तर मन्दिरको त्यस्तो स्थानको लागि मन्दिर किन उपयुक्त छैन भनेर येशूले तिनीहरूलाई वर्णन गर्नुभएन, तर पूर्ण रूपमा नयाँ पक्षमा परिवर्तन गर्नुभयो: यो मन्दिर भत्काउनुहोस् र तीन दिनमा म फेरि यो उठाउन चाहन्छु। (V। १ Z ज्युरिख बाइबल) Jesus sprach von seinem eigenen Leib, was die jüdischen Glaubensführer jedoch nicht wussten. Zweifellos hielten sie seine Antwort also für lächerlich, nichtsdestotrotz nahmen sie ihn auch jetzt nicht fest. Jesu Auferstehung zeigt, dass er durchaus befugt war, den Tempel zu reinigen, und seine Worte deuteten bereits auf die bevorstehende Zerstörung desselben hin. Als die jüdischen Glaubensführer Jesus töteten, zerstörten sie damit auch den Tempel; denn der Tod Jesu machte alle zuvor dargebrachten Opfergaben hinfällig. Am dritten Tag darauf ist Jesus auferstanden und erbaute einen neuen Tempel – seine Gemeinde.
यूहन्नाले हामीलाई भन्दछन्, धेरै मानिसहरूले येशूमा विश्वास गरे किनभने तिनीहरूले उनको चमत्कारहरू देखे। यूहन्ना :4,54: ले यो दोस्रो चिन्ह हो भनेर बताउँछ; मेरो धारणामा, यसले यस निष्कर्षमा पु .्याउँछ कि मन्दिरको सफाइ क्रमशः बाहिर रिपोर्ट गरिएको छ किनकि यो ख्रीष्टको काम वास्तवमा के हो भन्ने संकेत हो। येशूले मन्दिरको बलिदान र सफा गर्ने विधिहरू दुवै समाप्त गर्नुभयो - र यहूदी धर्मगुरुहरूले पनि अन्जानमै उहाँलाई शारीरिक रूपमा नाश गर्ने कोसिस गरे। जहाँसम्म, तीन दिन भित्र, पानीदेखि रक्सीमा सबै कुरा बदल्नु पर्छ - मरेको अनुष्ठान अन्तिम विश्वास औषधि बनाउनु पर्छ।